Volcanoes kachasị ukwuu n'ụwa: njirimara na ọnọdụ | Meteorology netwọkụ
Volcanoes kacha ukwuu n'ụwa
Portillo nke German | 11/01/2022 10:00 | Geology
A na-enwekarị ugwu mgbawa 20 na-arụ ọrụ n'ụbọchị ọ bụla n'oge ọ bụla gburugburu ụwa. Nke a pụtara na ntuli aka ọhụrụ abụghị ihe pụrụ iche dịka o siri dị anyị. Dị ka ọ dị n'oké ifufe, ihe karịrị 1000 àmụmà na-ada na njedebe nke ụbọchị. Nke ugwu mgbawa kachasị n'ụwa Ha bụ ndị mgbawa na nha ha ka ukwuu.
N'isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya n'ịgwa gị ihe bụ àgwà nke ugwu mgbawa kacha ukwuu n'ụwa.
1 Volcanoes kacha ukwuu n'ụwa
1.1 Nevados Ojos del Salado Volcano
1.2 Mauna Loa Volcano
1.3 Ugwu Etna
2 Volcanoes kachasị ukwuu n'ụwa: ugwu mgbawa
Dị ka Smithsonian Global Volcanology Programme si kwuo, enwere ihe dịka 1356 ugwu mgbawa na-arụ ọrụ n'ụwa niile, nke pụtara na ugwu mgbawa na-arụ ọrụ bụ ndị na-agbawa ugbu a, na-egosi ihe ịrịba ama nke ọrụ (dị ka ala ọma jijiji ma ọ bụ nnukwu ikuku gas) ma ọ bụ nwee ahụmahụ na-agbọpụta ugwu mgbawa, ya bụ, n'ime afọ 10.000 gara aga.
Enwere ụdị ugwu mgbawa dị iche iche, mgbawa ma ọ bụ obere mgbawa, nke ike mbibi ya dabere n'ọtụtụ ihe. Enwere ugwu mgbawa n'ala, enwere ọtụtụ olulu mmiri, mmiri mmiri, na ihe mejupụtara ala dị iche iche, mana gịnị bụ ugwu mgbawa kacha ukwuu n'ụwa?
Nevados Ojos del Salado Volcano
N'ịbụ nke dị na ókèala Chile na Argentina, Nevados Ojos del Salado bụ ugwu mgbawa kachasị elu n'ụwa, mana ọ na-ebili naanị mita 2.000 n'elu ntọala ya. Ọ gbagoro na mita 6.879 n'akụkụ Andes.
Ọrụ ikpeazụ e dekọrọ na ya bụ na Nọvemba 14, 1993, mgbe a hụrụ kọlụm isi awọ nke vapor na solphataric gas ruo awa atọ. Na Nọvemba 16, ndị na-ekiri ndị na-ahụ maka ọrụ ugbo anụ ụlọ na ndị uwe ojii mpaghara Maricunga, nke dị kilomita 30 site na ugwu mgbawa ahụ, hụrụ ogidi ndị yiri nke ahụ ma na-esichaghị ike.
Mgbawa ugwu mgbawa ugwu Mauna Loa dị mita 2.700 ala karịa Ojos del Salado na Nevada., ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10 elu karịa Andes n'ihi na ọ na-ebili ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 9 n'elu ala oké osimiri. N'ụzọ dị otú a, ọtụtụ ndị na-ele ya anya dị ka ugwu mgbawa kacha ukwuu n'ụwa. Ọkpụkpụ Mokuaweo, nke kacha ochie na nnukwu olulu 6 x 8 km, bechapụ elu ya.
Ọ bụghị naanị ugwu mgbawa na-ewere nnukwu mana ọ dịkwa elu. Ọ bụ ezie na e nwere ugwu mgbawa ndị ọzọ sokwa n'otu netwọkụ nke ugwu mgbawa nke dị na gburugburu agwaetiti Hawaii, nke a bụ otu n'ime ndị kasị ibu. N'elu oke osimiri ọ nwere elu ihe dịka mita 4170. Ndị a akụkụ ọnụ na elu na obosara-eme ka mkpokọta olu nke ihe dịka 80.000 cubic kilomita. N'ihi nke a, ọ bụ ugwu mgbawa kachasị ukwuu n'ụwa n'ihe gbasara obosara na olu.
A ma ama maka ịbụ ụdị mgbawa ugwu nwere àgwà pụrụ iche. Ọ na-aga n'ihu na-asọpụta dị elu nke na-esite na mgbawa ugwu mgbawa oge ochie. Ọ bụ ugwu mgbawa na-ewere dị ka otu n'ime ndị kasị arụ ọrụ na Ụwa. Kemgbe e hiwere ya, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbawa ugwu mgbawa na-aga n'ihu, n'agbanyeghị na o siri ike. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ ndị toro ogologo ma nwee ntọala nke ọrụ ahụ na nso ya n'etiti ndị mmadụ. Nke a pụtara na etinyere ya na ọrụ Volcanoes nke afọ iri, nke na-eme ka ọ bụrụ isiokwu nke nyocha na-aga n'ihu. N'ihi nyocha ndị a, enwere ọtụtụ ozi gbasara ya.
Ugwu Etna, nke dị na Catania, obodo nke abụọ kasị ukwuu na Sicily, Ịtali, bụ ugwu mgbawa kachasị elu na kọntinent Europe. Ogologo ya dị ihe dị ka mita 3.357, yana dịka ụlọ ọrụ Italian National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV) siri kwuo. Mgbawa na-aga n'ihu n'afọ ndị na-adịbeghị anya ebulila elu ha dị mita 33 n'ime obere oge.
Mgbe ụbọchị 20 kwụsịrị, Ugwu Etna gbawara ọzọ na Tuzdee, Septemba 21. Ọ bụ Smithsonian's Global Volcanology Programme bụ otu n'ime ugwu mgbawa ugwu kachasị ama n'ụwa, mara maka ọrụ mgbawa ugwu ọ na-enwekarị, ọtụtụ nnukwu mgbawa, na nnukwu lava ọ na-awụsa.
N'ebe dị elu karịa mita 3.300. Ọ bụ ugwu mgbawa ugwu kachasị elu na nke kachasị obosara na kọntinent Europe, ugwu kachasị elu na basin Mediterranean na ugwu kasị elu na Ịtali na ndịda Alps. Ọ na-ele anya n'Osimiri Ionian n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, osimiri Simito n'ebe ọdịda anyanwụ na ndịda, na Osimiri Alcantara n'ebe ugwu.
Ugwu mgbawa na-ekpuchi ebe dị ihe dị ka square kilomita 1.600, nwere dayameta nke ihe dị ka kilomita 35 site n'ebe ugwu ruo na ndịda, gburugburu ya dị ihe dị ka kilomita 200, na olu nke ihe dị ka square kilomita 500.
Site n'ogo oké osimiri ruo n'elu ugwu, ọdịdị ọdịdị na mgbanwe ebe obibi na-eju anya, tinyere ọmarịcha ihe okike ya. Ihe a niile na-eme ka ebe a bụrụ ihe pụrụ iche maka ndị njem njem, ndị na-ese foto, ndị na-ahụ maka ihe okike, ndị ọkà mmụta mgbawa ugwu, nnwere onwe ime mmụọ na ndị hụrụ ụwa na paradaịs n'anya. Eastern Sicily na-egosiputa ọdịdị ala dị iche iche, mana site n'echiche ala ala, ọ na-enyekwa ụdị dị iche iche na-enweghị atụ.
Volcanoes kachasị ukwuu n'ụwa: ugwu mgbawa
Nnukwu ugwu mgbawa bụ ụdị ugwu mgbawa ugwu nke ọnụ ụlọ magma ji otu puku kwuru puku okpukpu karịa ugwu mgbawa, yabụ nwere ike iwepụta mgbawa kacha ukwuu na nke na-emebi emebi n'ụwa.
N'adịghị ka ugwu mgbawa ọdịnala, o doro anya na ha abụghị ugwu, kama ọ bụ ebe nchekwa magma dị n'okpuru ala, nke nwere naanị nnukwu ịda mbà n'obi nke yiri olulu mmiri a na-ahụ n'elu.
Enweela ihe dị ka ugwu mgbawa ugwu iri ise n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa anyị, na-emetụta nnukwu mpaghara ala. Otú ahụ ka ọ dị n’Ugwu Tuba, bụ́ nke gbawara na Sumatra afọ 74.000 gara aga. 2.800 cubic kilomita nke lava. Agbanyeghị, nke a abụghị nke ikpeazụ, dịka nke kacha ọhụrụ mere na New Zealand ihe dịka afọ 26,000 gara aga.
Ikekwe otu n'ime ndị kasị mara amara bụ Yellowstone supervolcano, na United States, nke caldera nke e hiwere 640.000 afọ gara aga na-akpata. ogidi ntụ nke ruru mita 30.000 n'ịdị elu nke ji uzuzu kpuchie Ọwara Oké Osimiri Mexico.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ugwu mgbawa kachasị ukwuu n'ụwa na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Volcanoes kacha ukwuu n'ụwa
Oké ifufe na Atlantic
Prague elekere astronomical